Nepal Deep | ‘गुरुलाई प्रदेशमा र मनोजमणिलाई नेविसंघमा हराएका शेखरलाई कसरी सभापति स्वीकार्ने?’
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औ महाधिवेशनमा सभापतिको दाबी गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइरालामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। प्रदेश १को प्रदेश अधिवेशनमा कोइरालाले भोट नहाल्दा कांग्रेस भित्र असाध्यै सम्भावना बोकेका भनिएका युवा नेता गुरुराज घिमिरे सभापतिमा मात्र दुई भोटले पराजित भएका छन्।
घिमिरेलाई प्रदेश सभापतिमा संस्थापनइतर समूहका केन्द्रीय नेताहरु डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य र बलबहादुर केसीले नै मतदान नगरेको पाइएको हो। सभापतिमा घिमिरे उद्धव थापासँग २ मतले पराजित भए। संस्थापन इतर समूहका नेताहरु मतदानमा सहभागि भएको भए नतिजा घिमिरेको पक्षमा आउने थियो।
तर नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र गैरजिम्मेवारपनको शिकार भए घिमिरे। गणतन्त्रको पक्षमा बोल्दा नेविसंघको सभापतिबाट बर्खास्त हुन पुगेका घिमिरे प्रमुख नेताहरुको द्वन्दको कोपभाजनमा परे। यद्धपी चर्को विरोध पछि उक्त घटनामा डा. शेखरले माफी माग्न बाध्य भएका छन्। उनले ‘गल्ती भए क्षमाप्रार्थी छु,’ भन्ने भाष्य प्रयोग गरेर माफी मागेका छन्। तर उनको रबैयाले सामाजिक सञ्जाल भरि उनको चर्को आलोचना भएको छ। धेरैले शेखरमा पनि यति विधिसम्मको गैर जिम्मेवारीपन देखिएको भन्दै उनलाई कसरी सभापति स्वीकार्ने भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा चल्न थालेको छ।
बाहिर गैर जिम्मेवारीपनको कुरा भइरहँदा घिमिरेलाई शेखरले नरुचाएको बुझिएको छ। शेखर प्रदेश अधिवेशन स्थलमा समेत सहभागी भएनन्। खुलेर भोट पनि मागेनन्। जसले निर्वाचन प्रभावित पार्यो। मोरंगका एक नेताका अनुसार शेखर मतदान स्थलमा पुगेको भएमात्र पनि घिमिरेको पक्षमा माहोल बन्थ्यो। तर त्यो सम्भव भएन। उनले भने, ‘शेखर’दा जस्तो नेता मतदान स्थलमा मात्र देखिएको भएपनि ५०-६० भोट बढी आउन सक्ने थियो। रामचन्द्र दाइ र शशांक डा’साब पोखरा नै पुगेर मतदान गर्नु भयो। उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नु भयो। नेताको उपस्थितिले माहोल परिवर्तन हुन्छ। यही त हो राजनीति।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका उनीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा मतदाता रहेका थिए। प्रदेश १ मा फराकिलो अन्तरले जित्ने आँकलन गर्दै केन्द्रीय नेताहरु मतदान गर्न नगएको बताइए पनि त्यस्तो नरहेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार घिमिरे पछिल्लो समय शशांक कोइरालासँग नजिक देखिएका थिए। उनको महाराजगञ्जमा आउजाउ बढेको थियो। जसले शेखर-सुजाता झस्केका थिए। उनीहरु आफ्नो आधार क्षेत्रमा शशांकको व्यक्तिले जितोस् भन्ने पक्षमा थिएनन्स्रो। त्यसैले उनलाई नियोजित रुपमा हराइएको थियो, स्रोतको दाबी छ।
शेखर बाहिर नदेखिए पनि संस्थापन इतर पक्षमा सधै भित्रि रुपमा खेल्ने खेलाडीको रुपमा चिनिन्छन्। शेखरबारे जानकार एक नेताका अनुसार नेविसंघको ११ औँ महाधिवेशनमा पनि शेखरले अहिलेको जस्तै खेल खेलेका थिए। ती नेताका अनुसार नेविसंघको अधिवेशनमा संस्थापन इतरका सभापतिका प्रत्यासी मनोजमणि आचार्यलाई हराउन भूमिका खेलेका थिए। आचार्य लगभग सय मतको अन्तरले संस्थापन पक्षका उम्मेदवार नयनसिंह महरसँग पराजित भएका थिए। आचार्यलाई हराउन शेखरले नै त्यतिबेला तनहुँका नेविसंघ नेता आनन्दराज त्रिपाठीलाई उठाएको ती नेताको दाबी छ। त्रिपाठी ३ सय ४८ मत ल्याएका थिए। शेखरकै कारण महामन्त्रीमा पनि संस्थापन इतर समूहका हिमालदत्त श्रेष्ठ र दिपक भट्टराई पराजित भएका थिए। ‘यो कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। नेविसंघ वृतमा चर्चा हुन्छ। तर त्यतिबेला मनोजमणि हारेको शेखरदा’को गैरजिम्मेवारीपनले हो। आनन्दलाई मात्र ब्याक गराइदिएको भए सबै पदाधिकारी हाम्रो प्यानलको आँउथे,’ ती नेताले भने।
उपत्यकाका मन्दिरबाट मूर्ति चोरीको घटना बढ्दो, प्रहरी र प्रशासन मूकदर्शक
‘एनसेलको प्रायोजनमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधिश र वकिलहरूले आन्दोलन गरिरहेछन्’
अघिल्लो वर्ष झैँ यस वर्षका डिभी विजेताको भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न अमेरिकी दूतावासको आनाकानी
न्याय क्षेत्रको ‘डेड-लक’ फुकाउने राणाको प्रयास: इजलासमा बस्ने तयारी !
पौडेलको रहस्यमय सक्रियता: देउवा रिझाएर फेरि ‘वरिष्ठ नेता’ हुने दाउ !
‘शेखरले सभापतिमा जित्न भन्दा पनि गुटको नेतृत्व हत्याउन खोजेका थिए’